PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-01-03 - Luyaqhubeka up­henyo lokubu­lawa komt­wana om­n­cane
Luyaqhubeka up­henyo lokubu­lawa komt­wana om­n­cane
Eyethu Baywatch - 2018-01-03 - NEWS • IZINDABA - Thando Ndlovu
SITHOLAKALE sin­tanta kweminye yemi­fula yaseM­tuba isidumbu sen­gane yomfana en­e­minyaka emithathu obeku­bikwe ukuthi in­ya­malale emva koku­lan­dela ezinye izin­gane za­kubo ema­son­tweni ed­lule. Lom­fanyana waseNkun­dusi eM­tuba wanya­malala ekuqaleni kwenyanga efike, uDisemba, nge­sikhathi elandela ezinye izin­gane za­kubo ozaz­icelwe ukuthi zisale naye zim­gade.
Okhu­lumela amaphoy­isa aseM­tu­batuba, uKpt Jus­tice Hlabisa uthi emva kwezin­suku ez­in­tathu kuthun­gathwa len­gane isidumbu sayo sibe sesitho­lakala sin­tanta kweminye yemi­fula khona en­daweni.
Nakuba kun­gaqon­dakali ukuthi lom­fanyana wafakwa yini em­fu­leni, kodwa umphakathi waku­len­dawo usola ukuthi wab­u­lawa isan­goma esazi­wayo en­daweni ngoba si­funa uku­gaya umuthi.
UKpt Hlabisa ube es­enxusa umphakathi ukuthi un­ga­lokothi uzithathele um­thetho ngezandla ngoba kuli­cala eli­bomvu uk­wenza njalo.
Le­si­sexway­iso siqhamuke nge­sikhathi amaphoy­isa kanye nabelaphi bend­abuko bekhu­luma nom­phakathi waku­len­dawo obuthukuthele ugane un­wabu,be­wucela ukuthi wehlise im­i­moya ukuze up­henyo lun­gap­haz­a­miseki.
In­duna yal­en­dawo, uMnuz.Man­tengu uthi nakuba kungekuhle uku­lahlekelwa amalungu om­phakathi ngendlela en­gaqon­dakali kodwa ube es­en­gxusa umphakathi ukuthi unikeze amaphoy­isa ithuba lokuphenya lolud­aba bese kuthi labo abanok­u­fakazi bek­wed­lulisele emaphoyiseni.
UKpt Hlabisa ube es­enx­isa umphakathi ukuthi uqinisekise ukuthi izin­gane zawo ziphep­hile futhi abazivumeli ukuthi ziz­iham­bele ngaphan­dle kwen­vume yabazali.
‘Kubalulek­ile ukuthi abazali bazi ngaso sonke isikhathi ukuthi zikuphi izin­gane zabo nokuthi zen­zani,’ kuphetha uKpt Hlabisa. Matu­batuba po­lice call for calm amid tod­dler’s mur­der in­ves­ti­ga­tion